दिल्लीमा आकाशे पुल नै चोरी ! - Everest Dainik - News from Nepal
दिल्लीमा आकाशे पुल नै चोरी !
नयाँदिल्लीः भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आकाशे पुल नै चोरी भएको छ । सन् २०१० मा बनाइएको एउटा आकाशे पुलका विभिन्न सामान चोरी भएको हो । सामान चोरी भएकै कारण दुई वर्षयता उक्त पुल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।
याे पनि पढ्नुस नयाँबानेश्वर चोकमा आकाशे पुलको निर्माण अघि बढ्यो
प्रहरीले पुल चोरीमा संलग्नमाथि कारवाही प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेको छैन । दिल्ली प्रहरीले पुल चोरी भएको उजुरी नै नआएको भन्दै उजुरीविना अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको बताएको छ ।
ट्याग्स: आकाशे पुल